सुनमा लगानी गर्नेहरु मालामाल, एकमहिनामै ६.२९% को रिटर्न, मूल्यमा नयाँ रेकर्ड
काठमाण्डौ । पहेँलो धातु सुनको मूल्य फेरि आकाशिएको छ । दैनिकजसो उछालको गतिमा बढेर सुनको भाउले रेकर्ड बनाइरहेको बेला सोमबार समेत सर्वाधिक मूल्यको अर्को रेकर्ड कायम भएको छ । आइतबारको तुलनामा प्रति तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ प्रतितोला ७६००० रुपैयाँको ऐतिहासिक उचाईमा पुगेको हो । नेपालमा सुनको भाउ बढेर प्रति तोलाकै ७६ हजारको...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार एकैपटक १ हजार रुपैयाँले बढेर सुनको भाउले नेपाली बजारमा उच्च रेकर्ड कायम गरेको हो । सुनको भाउ आइतबार प्रतितोला छापावाल ७५ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७५ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यो नेपालकै इतिहासमा उच्च मूल्य हो । त्यसो तीन...
दिनदिनै उकालो लाग्दै सुनको भाउ, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । पुस महिना लागेयता सुनको भाउ उकालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । पुसयता मात्रै सुन तोलामा १३ सय रुपैयाँले बढिसकेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो साता कारोबारको चौथो दिन सुनको भाउ तोलामा ६०० रुपैयाँले बढेको छ । सुन प्रतितोला बुधबार छापावाल ७२ हजार ८०० र तेजाबी ७२ हजार ५०० कायम भएको छ । हिजो मंगलबार पनि सुनको भाउ...
फेरि बढ्न थाल्यो सुनको भाउ, चाँदीको पनि बढ्दै
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको भाउ फेरि बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार पनि सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको छ । तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७२ हजार २०० रुपैयाँ तेजाबी सुन ७१ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको भाउ हिजो सोमबार पनि तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७१...
लगातार चार दिनदेखि स्थिर रहेको सुनको भाउ बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
काठमाण्डौ । लगातार चार दिनदेखि स्थिर रहेको सुनको भाउ यो साता कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको छ । तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७१ हजार ९०० र तेजाबी सुन ७१ हजार ६०० रुपैयाँमा कायम भएको छ । पुस महिना लागेयता सुन तोलामा ४०० रुपैयाँमात्र...